QD3900H1 dia fakan-tsarimihetsika manan-tsaina sy ivon'ny haino aman-jery ao anaty iray. Asehoy ireo zavatra sy antontan-taratasy amin'ny mazava tsy mampino. Famaha HD 1080p miaraka amin'ny zoom optika 12x ary zoom nomerika 10x.
Ny fanatsarana ny soratra sy ny jiro lamosina dia mahatonga ireo antontan-taratasy sy boky ho mora kokoa hovakiana avy lavitra. Ny fitadidiana anatiny ao anatiny dia ahafahanao maka sary sy horonan-tsary mandritra ny famelabelaranao izay azo averina amin'ny fotoana rehetra.
Fanamarihana: Manohana ny marika Qomo ho an'ny demo izahay raha ao amin'ny famokarana faobe dia manaiky OEM / ODM
Anotaterina teo an-toerana
Ny CenterCam QD3900H1 dia manana fahaiza-manao annotation namboarina, ahafahan'ny mpampiasa manisy marika mora foana ireo antontan-taratasy vinavinaina nomerika eo an-toerana. Manehoa sary manaitra amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny zoom optika sy nomerika tsy mampino mba hakana antsipiriany manan-danja.
Omena rindrambaiko maimaim-poana Qcamera
Izy io dia rindrambaiko fandraketana sary/annotation/video. Mifanaraka amin'ny Windows 7/10, Mac
1-Tolotra sy fohy fitaovana.
Rehefa manokatra ny logiciel ianao dia mora ampiasaina miaraka amin'ny bara fitaovana ao amin'ny interface tsara ohatra ny zoom in / freeze / timer.
2-Fanamarihana amin'ny fotoana tena izy
Manorata izay tianao ary tehirizo hozaraina
Mora ny manatratra izay fahasamihafana kely ao anatin'ny zavatra iray. Azonao atao ny mametraka fifanoherana amin'ny fampisehoana mavitrika sy static.
Fakan-tsary antontan-taratasy QD3900H1 dia iray amin'ireo fakantsary antontan-taratasy mpivarotra tsara indrindra ao Qomo. Afaka mizara sary nohalehibeazina mihoatra ny 12x zoom optika ianao.
Hotkeys azo ampiharina amin'ny sambo. Miasa amin'ny bokotra iray fotsiny, ohatra ny freeze/plack back/menu…
Fifandraisana be dia be amin'ny lafiny aoriana
Audio-in/out, Hdmi in/out, projecteur, ordinateur in/out
Fifandraisana amin'ny lafiny manankarena ho an'ny karatra SD / projectors / totozy / RGB IN / Audio in / RS232
Side interface tsara izay azonao apetraka ny fanaraha-maso lavitra tsy misy very
Sandry roa miaraka amin'ny hazavana fanampiny manan-tsaina LED ao anatiny dia manampy amin'ny sehatry ny fahitana mazava kokoa amin'ny tontolo maizina.
Optical zoom, fampisehoana HD miaraka amin'ny zoom 12xopticla ary zoom 10x nomerika
Ny Mikrofon-trano anatiny dia mahatonga anao ho horonan-tsary mazava miaraka amin'ny firaketana feo
QD3900H1 fakan-tsary antontan-taratasy fisaka azo ampiasaina ho mpanova universal. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny fitaovana isan-karazany ao anatin'izany ny solosaina, projector, laptop ary ny votoatin'ny projection amin'ny fotoana tena izy.
Standard fonosana fomba: 1 pc/carton
lanja Net: 5KG
Lanja lehibe: 7 kg
Fonosana habeny: 640*230*535mm
Manaraka: Qomo QD3900H2 Desktop Document Camera
teo aloha: Visualizer zavatra amin'ny fomba vaovao
Mividiana fakan-tsary Document
Fakan-tsary Portable Document
QD3900H1 Flatbed Document Camera Qucik Details
Takelaka data QD3900H1
QD3900H1 bokikely fakan-tsary misy lamba fisaka